Halefa aiza sy hanaovana inona? : sarona ny taolam-paty… 1 taonina sy sasany | NewsMada
Halefa aiza sy hanaovana inona? : sarona ny taolam-paty… 1 taonina sy sasany
Taolam-paty 1.560 kilao, tanaty gony lehibe maromaro… Tsy mbola nisy raharaha halatra taolam-paty goavana noho ity saron’ny zandary any Vatomandry ity hatramin’izay. Hatao inona? Halefa aiza? Iza no mpividy? Fanontaniana tsy mbola voavaly mihitsy ireo.
Razana aman-jatony ve? Hatramin’izay nampirongatra ny halatra taolam-paty, goavana indrindra tamin’ny saron’ny zandaty ity nitranga tany Vatomandry ity. Nisy taolam-paty tamin’ny gony nilanja 60 kilao hita tao amin’ny fokontanin’Ambalamangahazo, kaominina ambanivohitr’i Niarovana, distrikan’i Vatomandry, iray volana lasa izay. Tsy misy dikany raha oharina tamin’ny tratra ny talata 17 oktobra lasa teo anefa izany, satria taolam-paty nilanja iray taonina sy sasany (1.500 kilao) be izao no saron’ny zandary avy ao amin’ny kaomandin’ny kaompanian’i Vatomandry.
“Misy olona milaza ho manana tahirina taolam-paty maro ka mitady mpividy, tao amin’ny kaominina ambanivohitra Tsaravinany, distrikan’ i Mahanoro. Napetraka ny vela-pandrika rehetra ka zandary nanao fanamiana sivly, niaraka tamin’ny vola tamin’ny kitapo no nalefa nanao ny fifandresen-dahatra ny alin’ny talata teo”, hoy ny nambaran’ny kapiteny Sahivelo Serge Gaetan, kaomandin’ny kaompanian’ny zandarimariam-pirenena Vatomandry.
Araka ny fampitam-baovao hatrany, tao amin’ny fokontany Antandroho ny nahitana ny taolam-paty 5 gony, ka olona dimy ihany koa no tompon’ny entana. Nitohy hatrany ny fanangonana ny entana io alina io, satria nisy hafa nanana 10 kitapo koa tany amin’ny fokontany Ampitakosy. Nangataka ireo mpividy mba hatambatra amina toerana iray ny taolam-paty rehetra, hanamorana ny fifanakalozana ara-barotra. Nahatratra 18 kitapo izany rehefa voaangona avokoa, efa tamin’ny 1 ora sy sasany maraina.
Vory ny entana sy ny mpivarotra vao nivadika ny mpividy, ka namoaka basy sy nanambara ny maha zandary azy ireo. Noraisim-potsiny ireto mpivarotra sy mpanangona taolam-paty, nanantena handray volabe tamin’io alina io.
Mila diovina ny tontolon’ ny fandriampahalemana
Tonga teny an-toerana, na dia vao nandray ny andraikitra amin’ny maha kaomandin’ny vondron-tobim-paritra Atsinanana azy aza ny talata teo, ny kolonely Tianarivo Gabriel Armandin. Baiko nomen’ny lehiben’ny zandarimariam-pirenena ny hamongorana izay fomba rehetra miendrika fanelingelinana amin’ny fandriampahalemana. Vao nanokatra ny famotorana ny zandary ary tsy hanaiky sao misy mikasa hanao fanelanelanana. “Famotorana ihany anefa ny anay fa ny fitsarana no tompon’ny teny farany”, hoy ny kolonely Tianarivo Gabriel Armandin.
Hiezaka ny hamantatra ny fasana niavian’ireto taolana marobe ireto ny zandary. Mampametra-panontaniana ihany mantsy ny fomba nanangonan’ireo jiolahy izany. Faritra anisan’ny sarotiny amin’ny fikitikitihana ny razana ny mponina any amin’ iny faritr’i Vatomandry sy Mahanoro iny, ka mety hiteraka fahatezerana ho azy ireo ity tranga ity. Soa fa tratra aloha ireo olona 10 saika hivarotra, izay azo antoka fa mbola manana mpiray tsikombakomba hafa. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana…
Sajo/Zo ny Aina